Dukaanka Apple ee Ruushka wuxuu yeelan doonaa waax hagaajinaysa iPhone | Wararka IPhone
Sida caadiga ah iyo markasta oo aan dhibaato ku qabno qalabkeena iyo markasta oo uu ku jiro dammaanad, waxaan aadeynaa App Store-ka kuugu dhow si aan isugu dayno xalinta dhibaatada. Laakiin markii ay na soo marto dhacdo aanu damaanad qaadin, sida jajabka shaashadda, waxaan fursad u leenahay inaan aadno App Store kuugu dhow ama aadno dukaan, kuwa badan oo ka jira suuqa, taas oo noo oggolaanaysa si loogu beddelo. Haddii ay dhacdo in qof kasta uu qabo wax su'aalo ah oo ku saabsan qiimaha, laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed ee iPhone 6 Plus, waan kuu xaqiijin karaa taasQiimaha dukaanka nuucaan ah iyo kan Apple Store waa isku mid, sidaa darteed uma qalanto in la isku dayo in wax laga qabto dhibaatada ka jirta meel ka baxsan Apple Store.
Sida laga soo xigtay daabacaadda The Moscow Times, Apple wuxuu damacsan yahay inuu ku bixiyo nidaamka dayactirka aaladda waddanka, ka dib dacwad uu muwaadin u gudbiyay, kugu eedeeyaa inaadan ku siinin taageero ku filan wax soo saarkaaga dalka gudihiisa. Dimitry Petrov, ayaa dacweeyay shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino sanadkii hore markii uu aaday Apple Store oo uu ka iibsaday iPhone-kiisa si shaashada qalabkiisa wax looga badalo. Laakiin wuxuu helay diidmada dukaanka oo waliba ku talisay inuu aado dukaan saddexaad oo ay ku xallin karaan dhibaatada shaashadda.
Sida murugadu u egtahay, Apple hadda ma bixiso adeegga bedelka shaashadda, geedi socod aad qaali u ah oo adag sababtoo ah mashiinada lagama maarmaanka u ah in lagu fuliyo xaaladaha wanaagsan. In kasta oo garsooraha uusan wali go’aan ka gaarin arinta, Apple waxay diyaarinaysaa Apple Stores si looga hortago kiisaska mustaqbalka sida Dimitri si ay u siiso taageero xaaladaha isticmaalayaasha dalka. Waqtigan xaadirka ah, marka isticmaaleyaashu ay dhibaato ku qabaan qalabkooda, waxaa lagu beddelaa mid kale oo aan dhibaato lahayn, laakiin haddii ay lagama maarmaan tahay in la dayactiro qasaaraha uusan daboolin, shirkaddu waxay isku dayeysaa inay gebi ahaanba iska indhatirto, iyadoo ku siineysa sawir aad u xun waddanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Dukaammada Apple ee Ruushka ayaa yeelan doona waax hagaajinaysa iPhone
DataMan Marka xigta waa bilaash wakhti xadidan